dany 8.3 par Administrateur - Fichier PDF
dany 8.3 .pdf
Nom original: dany 8.3.pdfTitre: dany 8.3Auteur: Administrateur
Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.7.3 / GPL Ghostscript 9.10, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 26/12/2014 à 07:01, depuis l'adresse IP 41.204.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 7034 fois.
2582. Mahalasa fisainana ny mandiadίa io Ãfiteatįra izay nahafatesan’olombelona an’aliny
maro dia maro tokoa io. 2583. Toraka izany ihany koa : tsy hita isa ny bibidίa, toy ny liona sy ny
tigįra, …, sy ny sisa tsy ary ho voatanίsa, izay nampisamborina eran’ny Apίra Rômaŋā mba ho
nahazoan’ny Ãperêra sy ny vahoakany miala voly ao anatin’ny ra mandriaka. 2584. Araka ny efa mba
fantapantatsίka, dia tsy tambo isaina ny marįtίry katôlίka rômáŋā izay natoraka hopotipotehin’iræny
bibidίa iræny, tao anatin’io Afiteatįra io. 2585. Tao koa ny antsoina hoe gįladiatêra. 2586. Matetika
dia ny olona izay notondroina ho fahavalo sy ny voaheloka ho faty, no nalefa hifamono ho faty tao
anatin’ny Kianja (arène) tao.
2587. Rehefa avy nihorakora-pifaliana tamin’ny fifamamonoan’ny samy biby aloha
indraindray ny Aperêra sy ny vahoaka, izay fihetsika noheverina ho toy ny kilalao asa verimaina
tahaka ny an’ny mpihiragasy, dia ampidirina amin’izay ny karazan’olona samy hafa izay
ampifanenana amin’ny bibidίa. 2588. Miakatra tanteraka tamin’izay ny tosidra samy hafa teo
anatrehan’ny fijininiky ny ran’ny olombelona sy ny bibidίa. 2589. Mifangaro ny fipitipitihan’ny ra,
ary dia mahatsiravina ny hoarakora-pifalian’ny mpitazana rehétra.
2590. Amin’ny farany indrίndra, dia ampidirina amin’izay ny gįladiatêra na ny olombelona
izay mifamono. 2591. Tapitrohatra eo amin’io dingana farany io, ny horakoraka izay tsy ifandrenesana
intsony. 2592. Tsy maintsy tapahin’ny mpandresy ny lohan’ny resy.
2593. Fa alohan’ny hifamonoan’ireo gįladiatêra ireo, dia miondrika sy manaj a ny Ãperêra
aloha izy iréo ka manao manao hoe : « Ave César ! Ceux qui vont s’entretuer te saluent » na
« tsarava ry Ãperêra Şejara ! Miarahaba anao izahay izay hifamono ho faty ». 2594. Matetika dia
fanafahana azy tamin’ny fanamelohana azy ho faty, no valisoa miandry ny mpandresy.
2595. Nefa maro ny tantara marina izay nampiondrika ny mpitazana. 2596. Ohatra ny an’ny
Masimbavy sy ny an’ny Masindahy maro dia maro tokoa, izay natoraka ho no viravirain’ny Liona.
2597. No torakovitra hatramin’ny Ãperêra. 2598. Tsy nihinana azy iréo ny liona na ny bibidίa hafa.
2599. Natory teo an-tongotr’izy iréo fotsiny iréo bibidίa iréo.
2600. Toraka izay ihany koa ny an’ny mpigadra iray. 2601. Afaka nitsoaka nandositra izy.
2602. Niafina tany anaty ala izy. 2603. Tampoka izay anefa, dia nisy biby iray izay no henony
nanatona azy miadana dia miadana. 2604. Liona goavambe no nanoloana azy. 2605. Tsy nihetsika izy.
2606. Natolotr’ilay liona azy ny tanany. 2607. Hay nisy tsilo goavana be tao amin’ny tongony aloha,
ka tsy no afaka nandeha tsara izy. 2608. Nesorin’ilay mpigadra nandositra ny tsilo ary dia afaka
niriarίa soa aman-tsara indray ilay liona.
2609. Samy no voasambotry ny miaramίla Rômaŋā na ilay Liona na ilay Mpigadra izay
nandositra. 2610. Tonga ny fotoana izay hamonoana ilay gadra nandositra kanefa no azo. 2611.
Natoraka tao anaty kianja izy. 2612. Novahaina ny varavarana nisy ny liona.
2613. Tsy nisy nahateny ny olona rehétra. 2614. Natory fotsiny teo an-tongotr’ilay gadra
nohelohina ho faty ilay liona.
2615. Hoy ny Aperêra : inona no tadiavinao ho valisoa ? 2616. Ny antsasaky ny fanjakako ve
sa inona ? 2617. Anjaranao no mamaly izay tokony ho navalin’ilay gadra navotan’ilay liona.
2618. Tena tantara marina tamin’ny andron’ny Aperêra Rômaŋā izany. 2619. Ambonin’izay,
dia tsy hita isa, hoy aho aminao, ny marįtίry katôlίka rômáŋā izay nasaina noviraviraina sy
nohanin’iræny bibidia iræny tany anatin’ny kianja (Arènes) rehétra izay nisy tany, tahaka izay hita
amin’ny sary eto, mba ho no fialambolin’ny vahoaka Rômaŋā.
2620. Ankehitrίny dia toy ny tantara fotsiny izany rehétra izany. 2621. Tsy mivavaka intsony
ny olon’ny Tany sy ny Firenéna Mandroso amin’ny ampany betsaka indrindra.
2622. I Fįraşa dia lasamborona eo anivon’ny fisamboaravoaran’ny fiainana tampoka izay hita
sy misy any amin’ny Tany sy ny Firenena Arabo-Şįlamo any. 2623. Mavaivay amin’izao taona arίvo
fahatélo izao ny ady hevitra ao Fįraşa ao momba ny fampisarahana tanteraka ny Finoana sy ny RafiPitondram-Panjakana (laicité).
2624. Tsy misy izay tsy mahalala fa i Fįraşa no loharano-kevitra nananana io hevitra fototra
momba ny fampisarantsarahana ny Lafin-kery sy ny vondrona samy hafa eo amin’ny lafiny
Fitondrampanjakana io. 2625. Tsy nisy na dia olombelona iray anéfa teto antany teto izay nanam-po
an’io fisavoritahana izay nahazo ny firenéna arabo sy ny finoana Şįlamo tamin’itý taonjato- 21 io itý.
2626. Hatraiza no mety ho fiafarany ? 2627. Ny manampahaizana rehétra dia efa samy milaza
fa hitondra fanavaozana tanteraka momba sy mikasika ny ho endrikendriky ny fiainana eto Antany eto,
hatramin’izao ka ho an’ny mandrakizay, io savoritaka izay niainan’ny Firenéna Arabo-Şįlamo
tamin’ny taona 2011, 2013 sy ny manaraka io. 2628. Mampitaitaina ny olombelona rehétra izany.
2629. Toraka izany no mahazo ny fįraşay amin’ny ankapobeny. 2630. Fantatra mantsy fa i
Fįraşa no Vavimatoan’ny Egįlijy Katôlίka Rômaŋā. 2631. I Fįraşa no Firenéna Zîdaίka Êropeaŋā
farany izay Lehibe indrίndra. 2632. I Fįraşa no Firenéna Işįlamίka Êrôpeaŋā farany izay Lehibe
indrίndra. 2633. I Fįraşa no taninketsa nampandova an’Izao Tontolo Izao ny rafi-Kevitra momba ny
fampisarahana ny Rafi-Pitondram-Panjakana sy momba ny Rafin-draharaham-pinoana (laicité).
Teatįra añáty saha izáy tena mahafinaritra tokóa iréo
Mamerina fomba fanaon’ny Gįréka na ny Rômaŋā Fahiny ny mpilalao.
Tany Ezipįta tany no nahitan’ny Fįraşay voalohany angamba ny vatolahy Telozoro tahaka ny zozoro
hoatra an’io hita eto amin’ny sary eto io. Feno kianjam-batolahy tahaka an’io eran’i Fįraşa. Nalainy
tany Ezipįta ny vatolahy Telozoro fototra izay angahatin’ny Ezipişiaŋā ny famerenana an’io any
aminy. Any Parişy no misy azy (obélisque originale).
Fiangonana tsy ivavahana intsony, lasa « mîjé ».
Fiangonana izay mbola mijanona ho fiangonana ka ivavahana
amin’Andriamanitra Tįrinité Masina.
Vahiny anefa no toa be indrindra amin’ny mpivavaka andavanandro.
Vatamasina misy sisantaolan’i Masindahy Antoine
Io afaran’y ny Obelisque io, dia fiangonana anakiray izay efa tsy ivavahana intsony fa navadiky ny
Fanjakana Fįraşay ho toeram-panaovana fampisehoan-kaikanto samy hafa. Niverina aho tamin’ny
andro nandalovako teo ka tsy no sahy niditra. Tsy esorina ny anarana nahafiangonana azy. Nefa
tamin’izany andro izany, dia fampisehoana momba ny sary arįtişįtika momba ny fahaizana
miboridana sy mijily ary mitanjaka, no fampisehoana natao tao. Gaga ny mpiandry ka nanasa hiditra
tsy nandoa vola. Katôlika Malagasy aho, hoy aho taminy, ka tsy hiditra fiangonana izay avadika ho
fampisehoana sary fiboridanana aho. Marina, hoy izy, namaly ahy fa heno hoe : tena mbola mpahay
mino an’Andriamanitra tokoa ny Malagasy.Tsy afaka miaina lavitra an’Andriamanitra, hono, hoy izy
tamiko, ny vahoaka Malagasy.
Tsy misy relijiozy mihiboka intsony ao anatin’io « cloître » io ao.
dany 8.3.pdf (PDF, 2 Mo)
intso fampisehoana farany olona bibid afaka rehetra tamin nandositra tahaka olombelon firenena momba tanteraka liona
Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00289405.